Showing १-१० of ३७५ items.
लेखक तथा राजनीतिज्ञ भुइदल राईको निधन
धरान । लेखक, साहित्यकार तथा राजनीतिज्ञ भुइदल राईको ९१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । इटहरी–९ माइला छोरोको घरमा बस्दै आएका राईको मंगलबार निधन भएको छ । हालसम्म उनले विभिन्न विषयमा ९७ वटा पुस्तक लेखेका छन् । भोजपुरको हतुवागढीको सिन्द्राङ स्थायी घर भएका उनी पछिल्लो समय छोराहरूको साथमा बस्दै आएका थिए । उनको अन्त्येष्टि धरानको धरान–१९ हरियालीमा अन्त्येष्टि गरिएको थियो । उनलाई श्रद्धाञ्जली दिनका लागि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसमेत उपस्थित भएका छन् । उनको अन्त्येष्टिमा श्रद्धाञ्जली अपर्ण गरेका थिए । दिवङ्गत भएका राई भोजपुर जिल्लाकै पहिलो जिल्ला पञ्चायत सभापति र तत्कालीन राष्ट्
धरानमा पढेका उपेन्द्र पागल को थिए ?
धरान / साहित्यकार उपेन्द्र पागलको बुधबार दिउँसो निधन भएको छ । दमको समस्याले थलिएका पागल सुनसरीको मधेशास्थित आफ्नै निवासमा मृत्यु भएको हो । विस १९९९ मा जन्मेका उपेन्द्र पागलको खास नाम उपेन्द्रबहादुर बस्नेत हो । २००७ सालभन्दा अगाडि नै अक्षर, अङ्क र अङ्ग्रेजी लिपि चिनिसकेको व्यक्ति हुन उनी । मामा सलकबहादुर कट्वालको संगतमा सात सालदेखि धरानको पब्लिक हाईस्कुल र आठ सालदेखि पिण्डेश्वर संस्कृत महाविद्यालयमा अध्ययन गरेका थिए । नेपालमा विश्वविद्यालय नभएका कारण बनारस संस्कृत विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त थियो पिण्डेश्वर महाविद्यालय । त्यहपिढेर उनले २०१४ सालमा प्रथमा परीक्षा बनारस पुगेर दिएका थिए
साहित्यकार समालोचक उपेन्द्र पागलको निधन
धरान । बहुमुखी प्रतिभाका धनी साहित्यकार तथा कवि समालोचक उपेन्द्र पागलको निधन भएको छ । उनको ७७ वर्षको उमेरमा आफ्नै निवास सुनसरीको साविक मधेसा गाविसमै बुधबार अपरान्ह करिब २ बजेतिर निधन भएको हो । वास्तविक नाम उपेन्द्रबहादुर बस्नेत हो । उनको एक श्रीमती र छोरीहरू मात्रै रहेका छन् । बहुमुखी प्रतिभाका धनी उपेन्द्र पागल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निर्वतमान प्राज्ञसमेत हुन् । हालै इनरुवा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयोजकसमेत रहेका पागलको कविता संग्रह, कथा संग्रह प्रकाशित भइसकेको छ । उनी चित्रकारसमेत हुन् । चित्रकार, निबन्धकार, समालोचक, कथाकारको छवी बनाएका उनले गीतसमेत लेखेका थिए । सञ्जीव धिमालको स्वरमा उनक
काेराेना महामारी चिन्ता: जल्दै गरेकाे देखे
जल्दै गरेको देखे, बल्दै गरेको देखे, सपनीमा हजुर, सभ्यताको गजुर , ढल्दै गरेको देखे १ ....... पल पलमा तान्डब देखे, एकान्तबासमा पान्डब देखे, प्रकृलेले हजुर मान्छे निल्दै ओकल्दै गरेको देखे ...... कामी रहेका मन देखे , बेगारी भएको जन देखे आत्मबिस्वासको चुली , गल्दै गरेको देखे । विज्ञान रोएको देखे, चम्चा चलाउनेले हात धोएको देखे विपतिको घडीमा पनि शक्तिशालीहरुको जुहारी, चल्दै गरेको देखे । ........ पैसा नबिकेको देखे भित्रबाट लास नझिकेको देखे मानवता बचाउन खातिर केहीको जागर अविरल , फल्दै गरेको देखे । २०७६ /१२/१७ बेलका, रामपुर (बेलका नगरपालिकाका मेयर स्वास्तिक थापाको फेसबुक वालबाट)
प्रकाशित मितिः चैत्र १८, २०७६
के हो समानता ?
समानता के हो समानता सगै भात खानु हो ? कि एउतै ओछ्यानमा सुत्नु नै हो समानता? चुलो नबल्नु हो कि दिनभर ननिभ्नु हो समानता? नाङ्गै हिंड्नु हो कि दिनहुँ कपडा फेर्नु हो समानता? भोकै बस्नु हो कि चौरासी ब्यान्जन खानु हो? दाउरा बेचेर दिनको एक छाक भात खानु हो कि दिन भरी चरीरहनु हो समानता? अथवा निराहार कि फलाहर हो समनता? गिट्टी कुटेर जीवन बिताउनु हो कि डाक्टर घरमा पालेर सेवा लिनु हो समानता? कि दिनभर प्लास्टिक टिपेर वा गित गाएर बच्चाहरुले पैसा ल्याएपछि चुलो धुवाँउनु हो समानता? नारा हो कि, सर्वहाराको गीत हो समानता
लुकेर युद्ध जित्नेछौं
विश्व बिजेता बन्नलाई बारूद गोला बनायौ! आकाश धर्ती जमायौ नाम पनि ठूलै कमायौ !! एउटा मसिनो किराले दुनियाँ विश्व थर्काउँदा! दर्शक बन्यौ तिमी नै सकेनौ तिन्लाई पड्काउँन !! भागाभाग छ मानव आउँदैछ पछाडि दानव !! सभ्यता मानव सिध्याउँन हिड्दै छ घर आँगन !! धिक्कार छ तिम्रो दम्भलाई धिक्कार छ अणु भट्टिलाई ! धिक्कार छ तिम्रो साम्राज्य धिक्कार छ तिम्रो बारूज्लाई !! के सक्छौ उसलाई हराउँन रूँदै छौ आफैँ धरधरी ! आउँदै छ कि अझइ बारूज गोला झलझली !! हामी त तेसै कम्जोर सक्दैनौं उसलाई हराउँन ! भागेर आफु एकान्त खोज्दै छौँ उसलाई भगाउँन!! युद्धको नयाँ रणनी
कोरोना त्रास: लकडाउन जिन्दगी !
जीवहरुमा सर्वश्रेष्ठ प्राणी, यो झालझेल, यो लुछातानी अनि भागदौड, कहाँ पुग्नलाई तिमी दौडिदैछौ । मैले तिमीलाई लगे पनि, अरु नै वाहानाले ताने पनि सबै त्यही नै त पुग्दैछौ । आधुनिकतासगैँ किन आफुले आफुलाई भुल्दैछौ ? त्यसैले त मानिस अाज मानिसदेखि लुक्दैछौ । चिकित्सकहरू व्यापार गर्छौ, विरामीलाई ग्राहक बनाउछौ । उपचार सेवा छोडेर राजनीति गर्छौ । व्यापारीहरु नाफा कुम्ल्याएर राजनीति थाल्छौ र देश चलाउछौ । अनि, बुद्धू नेताहरु टेवलमुनि लेनदेन गर्छौ, बुद्धिजिवीहरुको नेतृत्व गर्छौ, देशलाई विकास गर्छु भन्छौ । जनताको सेवा चाहिँ कहिले गर्छौ ? भो अब, तिम्रो व्यापार बन्द
धरान । ‘लक डाउन’ ले धेरैलाई ‘लक’ अर्थात् कुजो झैं बनाएको छ । तर, यही ‘लक डाउन’ लाई भरपूर सदुपयोग गर्नेहरू पनि हाम्रो समाजमा प्रसस्तै पाइन्छन् । घरमै दिनभरि बस्दा ‘बोर फिल’ गर्नेहरूलाई समाजका ऐनाका रूपमा रहेका साहित्यकार तथा कविहरू भने लेखपढ र सिर्जनात्मक कार्य गरेर बिताउनका लागि सल्लाह दिन्छन् । जे गरे पनि सिर्जनात्मक कार्य गरेमा ‘लकडाउन’ फलदायी बन्ने उनीहरूको सुझाव छ । अन्य समयमा हतारोहतारमा बिताउने साहित्यकारहरू यतिबेला फुर्सदिला बनेका छन् । थुप्रै समयदेखि बाँकी रहेका किताबहरूलाई पुस्तकारको रूपमा ल्याउने हतारोमा लागेका छन् । के गर